एयरटाइज एयर 4920 XNUMX२० स्मार्ट मेस प्रयोगकर्ता म्यानुअल - म्यानुअल
घर » एयरटाइज » एयरटाइज एयर 4920 XNUMX२० स्मार्ट मेस प्रयोगकर्ता म्यानुअल
एयरटाइज एयर 4920 XNUMX२० स्मार्ट मेस प्रयोगकर्ता म्यानुअल
अप्रिल 26, 2018 अप्रिल 27, 2018 10 टिप्पणिहरु एयरटाइज एयर 4920 XNUMX२० स्मार्ट मेस प्रयोगकर्ता म्यानुअलमा
1 एयरटाइज एयर 4920 XNUMX२० स्मार्ट मेस प्रयोगकर्ता म्यानुअल
1.1 द्रुत स्थापना गाइड
1.1.1 सम्बन्धित म्यानुअल / संसाधन
द्रुत स्थापना गाइड
१1600०० एमबीपीएस स्मार्ट मेस एक्सेस पोइन्ट एयर 4920 XNUMX२०
सहज सेटअप: पहुँच पोइन्ट
१. एक एयर 1 4920२० लाई तपाईको राउटरको छेउमा राख्नुहोस् र दुईमा इथरनेट प्रयोग गरी जडान गर्नुहोस्
केबल (पहेंलो प्लग)।
२. एयर24920२० उपकरण मइनमा जोड्नुहोस् र पावर स्विच थिच्नुहोस्।
Both. both GHz र २.3 GHz LEDs ठिक हरियो नभएसम्म कुर्नुहोस् यसले minutes मिनेट लिन सक्दछ।
Now. अब, तपाई आफ्नो नयाँ वायरलेस नेटवर्कमा मोबाइल उपकरणहरू जडान गर्न सक्नुहुनेछ।फ्याक्टरी पूर्वनिर्धारित नेटवर्क नाम र पासवर्ड उपकरणको तल लेबल गरिएका छन्।
- प्रत्येक ग्राहकमा (उदाहरण ल्यापटप, फोन वा ट्याब्लेट),
लेबलमा नेटवर्कमा जडान गर्नुहोस्।
- जब संकेत दिनुहोस् नेटवर्क पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
(. (वैकल्पिक) तपाईं नेटवर्क नाम (SSID) र तपाईंको नेटवर्कको पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाइँको नेटवर्क मा जोड्नुहोस्, खोल्नुहोस् web ब्राउजर र "http: //air4920.local" टाइप गर्नुहोस्
ठेगाना बार लग ईन गर्नुहोस् र बायाँ फलकबाट QUICK SETUP मा नेभिगेट गर्नुहोस्। (पूर्वनिर्धारित लगइन पासवर्ड खाली छ।)
तपाईंको वाइफाइ कवरेज विस्तार गर्नुहोस् (मेस):
तयारी: नयाँ एयर 4920 XNUMX२० जडान गर्दै
१. राउटर अवस्थित कोठामा नयाँ एयर 1 4920२० लाई झन्डै तीनको दूरीमा राख्नुहोस्
अवस्थित एयर 4920 5२० उपकरणबाट मिटरहरू, यसलाई मुख्यमा जडान गर्नुहोस् र दुबै G GHz र २.2.4 GHz LEDs हरियो फ्ल्यासिंग नभएसम्म प्रतिक्षा गर्नुहोस् (seconds सेकेन्ड अन, seconds सेकेन्ड अफ)। यसले minutes मिनेट लिन सक्दछ।
२.a WPS बटन थिच्नुहोस् अवस्थित एयर 4920 2२० (राउटरको छेउमा) २ सेकेन्डको लागि र
त्यसोभए नयाँ एयर 4920 2२० लाई २ सेकेन्डका लागि (२ ख)।
G GHz र २.5 GHz LEDs फ्ल्यास गर्न सुरू गर्नुहोस् र उपकरणहरू स्वत: जडान हुन्छ। यस प्रक्रियाले minutes मिनेट लिन सक्दछ। जडान एक पटक स्थापित भएको छ एलईडीहरू हरियो बढ्छ (G गीगाहर्ट्ज एलईडी संक्षिप्त रूपमा प्रत्येक seconds सेकेन्डमा एक पटक बन्द हुन्छ)
बधाई छ तपाईंले सफलतापूर्वक आफ्नो नयाँ उपकरण कन्फिगर गर्नुभयो। तपाईंको अवस्थित एयर 4920 4920२० नेटवर्क प्रमाण पत्रहरू तपाईंको नयाँ एयर XNUMX XNUMX२० मा स्वचालित रूपमा कन्फिगर गरिएको छ।
नोट: यदि नयाँ उपकरणमा 5GHz एलईडी पाँच मिनेट भित्र हरियो प्रकाश छैन भने,
कृपया चरण २ लाई दोहोर्याउनुहोस्।
तपाईंको मनपर्ने कोठामा एयर 4920 XNUMX XNUMX२० स्थापना गर्दै
3. नयाँ एयर 4920 XNUMX२० अब अनप्लग गर्न सकिन्छ र तपाईंको मनपर्ने कोठामा राख्न सकिन्छ।
जडान स्वत: स्थापना हुनेछ। यस प्रक्रियाले तीन मिनेट लिन सक्दछ।
नोट: यदि G गीगा हर्ज एलईडी हरियो प्रकाश छैन भने (The गीगा हर्ज एलईडी छोटो छोटो मा प्रत्येक मा एक पटक बन्द हुन्छ
Seconds सेकेन्ड) तीन मिनेट भित्र, कृपया अध्याय consult समस्या निवारण consult (पृष्ठ)) मा परामर्श गर्नुहोस्।
4. (वैकल्पिक) अब, तपाइँ वायर्ड उपकरणहरु (यो पूर्व मा जोड्न सक्नुहुन्छample, सेट-टॉप बक्स) ईथरनेट केबल (पहेंलो प्लग) को प्रयोग गरी एयर ४ 4920 २० मा।
5. (वैकल्पिक) तपाई आफ्नो नेटवर्कमा थप एयर 4920 1२० हरू थप्न सक्नुहुनेछ १ बाट चरणहरू दोहोर्याएर।
वायरलेस कभरेज सुधार गर्दै
यदि तपाइँ अर्को कोठा मा वायरलेस कवरेज सुधार गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ एक अतिरिक्त एयर ४ 4920 २० सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ ईथरनेट को माध्यम बाट यन्त्रहरु लाई यो एयर ४ 4920 २० (पूर्व को लागी) लाई जोड्न सक्नुहुन्छ।ampएक एसटीबी, कम्प्यूटर वा खेल कन्सोल)।
दायरा सुधार गर्दै
यदि तपाईंले कभर गर्न चाहानु भएको स्थान तपाईंको अवस्थित एयर 4920 4920२० बाट धेरै टाढा छ भने, तपाईं थप एयर XNUMX XNUMX२०s स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ पुग्न।
उत्तम प्रदर्शनको लागि सुझावहरू:
- तपाईंको मोडेममा वायरलेस सेवा बन्द गर्नुहोस्।
- एकाईहरुलाई टाढा राख्नुहोस्:
- विद्युतीय हस्तक्षेपको सम्भावित स्रोतहरू। उपकरणहरू जसले सम्भावित हस्तक्षेप गराउँदछ सीलिंग फ्यानहरू, गृह सुरक्षा प्रणाली, माइक्रोवेभहरू, पीसीहरू, र कर्डलेस फोनहरू (ह्यान्डसेट र आधार) समावेश गर्दछ।
- ठूला धातु सतहहरू र वस्तुहरू। ठूला वस्तुहरू र फराकिला सतहहरू जस्तै गिलास, इन्सुलेटेड भित्ताहरू, माछा ट्या ,्कीहरू, ऐना, ईट्टा, र क concrete्क्रीट भित्ताहरूले पनि वायरलेस सals्केतहरूलाई कमजोर पार्न सक्छ।
- स्रोत र तातो क्षेत्रहरू जस्तै ओभन र सूर्य कोठा साथै प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश पनि राम्रो एयर कन्डिसन छ भने पनि।
-साथै, यो अत्यधिक सिफारिश गरिन्छ कि निर्बाध बिजुली आपूर्ति (UPSes) (वा, कम से कम, वृद्धि रक्षक) एयर ४ 4920 २०२० र अन्य बिजुली उपकरणहरु (VDSL मोडेम, राउटर/गेटवे, सेट-टॉप बक्स, टिभी, आदि को रक्षा गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। विद्युतीय खतराहरु बाट। विद्युतीय आँधी, भोल्युमtagई surges र बिजुली पावर ग्रिड संग सम्बन्धित अन्य जोखिम बिजुली उपकरणहरु को लागी महत्वपूर्ण क्षति हुन सक्छ। अतिरिक्त मा, बिजुली मा एक 1 सेकेन्ड को अवरोध पनि सबै मोडेम, वायरलेस ग्राहकहरु, टिभी, सेट-टॉप बक्स, आदि बन्द वा रिसेट गर्न को लागी कारण हुन सक्छ। यदि उपकरण स्वचालित रूप मा शुरू हुन्छ, यो धेरै मिनेट पहिले सबै प्रणालीहरु लाई अनलाइन फिर्ता आउछ र तपाइँ तपाइँको इन्टरनेट आधारित सेवाहरुको आनन्द लिन को लागी अनुमति दिनुहुन्छ।
- कारखाना सेटिंग्समा फर्कदै:
युनिट कारखाना सेटिंग्समा फर्कन, रिसेट बटनमा थिच्नुहोस् (पछाडिको सानो उद्घाटनमा) १० सेकेन्डको लागि। धातुको पेपरक्लिप (विस्तारित टिपको साथ) वा कडा टुथपिक यस कार्यको लागि सामान्यतया राम्रो विकल्प हुन्छन्। जब रिसेट प्रक्रिया ट्रिगर हुन्छ, अगाडिको LEDs अस्थायी रूपमा "shimmer" हुनेछ र इकाई कारखाना सेटिंग्समा (लगभग minutes मिनेटमा) रिबुट हुनेछ।
- यदि तपाइँ नेटवर्क सेटिंग्स को निजीकृत, को यहाँ कृपया रेकर्ड गर्नुहोस्:
नेटवर्क नाम: ………………………………………………………………
प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस पासवर्ड: ……………………………………………… ..
यो उत्पादन खुला स्रोत समुदाय द्वारा विकसित सफ्टवेयर को उपयोग गर्दछ। कुनै पनि यस्तो सफ्टवेयर विशिष्ट लाइसेन्स शर्तहरु कि विशेष सफ्टवेयर (जस्तै GPL, LGPL आदि) को लागी लागू गरीएको छ। लागू लाइसेन्स र इजाजतपत्र सर्तहरु मा विस्तृत जानकारी उपकरण को प्रयोगकर्ता इन्टरफेस मा पाउन सकिन्छ। यो उत्पादन को उपयोग गरेर, तपाइँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि तपाइँ पुन: हुनुहुन्छviewएड यस्तो लाइसेन्स सर्तहरु र कि तपाइँ उनीहरु द्वारा बाध्य हुन सहमत हुनुहुन्छ। जहाँ यस्ता सर्तहरु तपाइँले भन्नुभएको सफ्टवेयर को स्रोत कोड को हकदार हो, कि स्रोत कोड AirTies बाट अनुरोध मा लागत मा उपलब्ध गराईनेछ। स्रोत कोड को एक प्रतिलिपि प्राप्त गर्न को लागी ईमेल मार्फत लिखित मा तपाइँको अनुरोध पठाउनुहोस् [ईमेल सुरक्षित] वा घोंघाई मेल मार्फत: एयरटाइज वायरलेस संचार गुलबहार माह। अवनी डिलिगिल सोक। होईन: el सेलिक इर् मर्केजी, मेकिडिइके,534394। 9,99 I इस्टानबुल / टर्की एयरटाइजले तपाईंलाई source,, plus plus अधिक सिपि .को लागतका लागि अनुरोध गरिएको स्रोत कोडको साथ एक सीडी पठाउँनेछ। विवरणका लागि कृपया सम्पर्क गर्नुहोस् [ईमेल सुरक्षित]
सम्बन्धित म्यानुअल / संसाधन
ब्लुटुथ जाल नेटवर्किंग उपयोगकर्ता पुस्तिका
ब्लुटुथ जाल नेटवर्किंग प्रयोगकर्ता म्यानुअल - अनुकूलित पीडीएफ ब्लूटूथ जाल नेटवर्किंग उपयोगकर्ता पुस्तिका - मूल पीडीएफ
SHARP एयर कंडीशनर प्रयोगकर्ता पुस्तिका
जेलियस एआईआर TWS हेडसेट उपयोगकर्ता पुस्तिका
Gelius AIR TWS हेडसेट प्रयोगकर्ता म्यानुअल Gelius AIR TWS हेडसेट प्रयोगकर्ता म्यानुअल - अनुकूलित PDF Gelius AIR TWS…
Hisense वातानुकूलित प्रणाली उपयोगकर्ता पुस्तिका
Hisense एयर कंडीशनिंग प्रणाली प्रयोगकर्ता मैन्युअल सेवा-हैंडलिंग-hisense- नया-आराम-भडमडल-अनुकूलित
अप्रिल 26, 2018 अप्रिल 27, 2018 पोस्टएयरटाइजTags: वायु 4920, एयरटाइज, प्रयोगकर्ता पुस्तिका
air4920.local [राउटर लगइन]
नोभेम्बर 16, 2018 12 मा: 51 हूँ
म एक्स्टेन्डरमा लगईन गर्न पासवर्ड प्राप्त गर्न सक्दिन, किनकि म्यानुअलमा उल्लेख गरिएको पासवर्ड कम्बल हो, म यो प्रयास गर्दछु र मैले पहुँच प्राप्त गरेन, र मैले भिन्न डिफल्ट पासवर्ड खोज्छु र मैले फेला पार्न सकिन प्याकेजको वा एक्स्टेन्डरमा नै
अप्रिल 15, 20206मा: 54 बजे
मेरो विश्राम बटन भ broke्ग भएको छ र त्यसो भए म कसरी यो बटन बिना आराम गर्न सक्दछु? ……
र घरमा आउने र यसलाई ठीक गर्ने कोही छैन।
मई 20, 20213मा: 18 हूँ
तपाईं WPS बटन १० सेकेन्डमा प्रेस गरेर पनि रिसेट गर्न सक्नुहुनेछ
मेरी Buckman भन्छन्:
जुन 25, 20207मा: 54 हूँ
म फेरि यो किन्ने छैन! तिनीहरू राम्रो छन् जब तिनीहरू सही काम गरिरहेका छन्, तर जब त्यहाँ तल बोलाउने कोही छैन जब मैले खोज्न सक्ने प्रत्येक नम्बरमा फोन गर्न प्रयास गरें।
अक्टोबर 16, 20206मा: 29 बजे
के एक एयरटाइज 4920 4921२० विस्तारकले जाल नेटवर्कमा एयरटिज XNUMX XNUMX XNUMX २१ विस्तारकको साथ काम गर्न सक्दछ?
केल्विन मिलर भन्छन्:
नोभेम्बर 22, 20204मा: 16 हूँ
मसँग २ एयरटिज युनिटहरू छन्। एक सीढी माथि र मुख्य एकाइ मोडेम डाउन सीढीहरूमा जडित। मसँग मेरो अग्लो क्युबको अर्को पट्टि छ तर घन केवल एउटा सीढीबाट जडान हुनेछ। यस्तो देखिन्छ कि स्थान द्वारा धेरै आईटमहरू माथिल्लो सीढीको सट्टामा सीढीहरूमा जडान हुँदैछन्। त्यहाँ बन्द इकाईमा जडान गर्न यी चीजहरूलाई बल गर्न कुनै तरिका छ?
एन्डी मुलचेक भन्छन्:
डिसेम्बर 1, 20204मा: 02 बजे
म समर्थन गर्दैन, तर मेरो बुझाइ यो हो कि मोडेमसँग जोडिएको एकाईले नेटवर्क स्थापना गर्दछ, र घर भर प्रयोग गरिन्छ। थप एकाइहरूले संकेतलाई बढावा दिन्छ, र प्रारम्भिक एकाईबाट स्थापित नेटवर्क विस्तार गर्दछ। त्यसो भए, तपाईं प्रारम्भिक एकाईबाट स्थापित नेटवर्कमा जडान गर्नुहुन्छ, र अतिरिक्त एकाई तपाईंको लागि संकेत बढाउँदछ।
अगस्ट 24, 2021 8 मा: 05 बजे
AirTies एयर ४ 4920 २० को लागी WPS पिन के हो
सेप्टेम्बर 11, 20215मा: 34 बजे
म यो बोर्ड को प्रशासक होइन। यो मैले आज सिकेको हो। दुई बर्ष को लागी म सफलतापूर्वक दुई AirTies 4920 इकाईहरु को उपयोग गरीरहेको थिएँ, कि मैले एक दोहोरो प्याक को रूप मा किनेको थिएँ (उनीहरु दुबै एकै कारखाना सेट वाईफाई नाम र पासवर्ड थियो)। मूल स्थापना सजिलो थियो।
आज मैले तेस्रो 4920 एकाइ थपे। मैले सुरु गर्नु भन्दा पहिले, मूल दुई एकाइहरु काम गर्दै थिए (5 GHz बटन प्रत्येक5सेकेन्ड flickered)। मेरो ल्यापटप मा, मैले त्यो कारखाना-सेट वाइफाइ नाम को एक उदाहरण देखे, र म कारखाना-सेट पासवर्ड को उपयोग गरेर ताररहित यो जडान गर्न सक्थे। मँ एक ईथरनेट केबल को उपयोग गरेर या त एकाइ संग जोड्न सक्छु।
यस बिन्दु मा मेरो कम्प्यूटर पनि संचालित मा तेस्रो इकाई आफ्नो वाइफाइ नेटवर्क सूची मा देख्न सक्छ, तर मँ यसको फरक कारखाना सेट वाईफाई नाम र पासवर्ड को उपयोग गरेर यो जडान गर्न सकेन। BTW, केहि बिन्दु मा, म पावर कॉर्ड को नजिकै रिसेट होल प्वाल मा एक कागज क्लिप को उपयोग गरी सबै तीन इकाईहरु लाई आफ्नो कारखाना सेटिंग्स मा रिसेट, तर त्यो तेस्रो इकाई को लागी मात्र जरूरी थियो जुन मैले "बिस्तारै प्रयोग गरीयो"।
4920 इकाई कि ईथरनेट केबल राउटर को माध्यम बाट जोडिएको छ, मास्टर छ। तेस्रो इकाई थप्न को लागी, मैले यसलाई मास्टर एकाइ बाट लगभग5फिट मा संचालित। कुनै ईथरनेट केबल तेस्रो एकाई संग जोडिएको छैन। मैले २ सेकेन्ड को लागी मास्टर युनिट मा WPS बटन थिचे। मैले तेस्रो एकाई WPS बटन २ सेकेन्ड को लागी थिचे। मैले ३-५ मिनेट पर्खें, र दुबै एकाइहरु '५ GHz बटन प्रत्येक ५ सेकेन्ड झिम्काउन थाले (तेस्रो इकाई लामो समय लाग्यो)। त्यो बिन्दु मा, अब तीन एकाइहरु मा संचालित संग, मेरो कम्प्यूटर मास्टर इकाई को वाइफाइ नाम मात्र देखियो (एक राउटर तार को माध्यम बाट जोडिएको)।
मेरो राउटर को प्रशासक को उपयोग गरेर web पृष्ठ, म देख्न सक्छु कि राउटर सबै तीन एकाइहरु देखीरहेको थियो (एक फरक आईपी ठेगाना संग प्रत्येक)। राउटर व्यवस्थापक पृष्ठ र मास्टर एकाइ को तल मा देखाइएको म्याक ठेगाना को उपयोग गरेर, म मास्टर एकाइ को आईपी ठेगाना पहिचान। तब मेरो ल्यापटप मा, म एक नयाँ ब्राउजर ट्याब मा त्यो आईपी ठेगाना प्रविष्ट, र त्यो मलाई वाईफाई नाम र पासवर्ड परिवर्तन गर्न अनुमति दिईयो। तपाइँ समाप्त (अन्य दुई एकाइहरु मा वाईफाई नाम र पासवर्ड परिवर्तन गर्ने कोशिश नगर्नुहोस्)।
अब, सबै तीन काम संग, म मेरो मोबाइल उपकरणहरु संग चारैतिर हिंड्न सक्छु र उनीहरु स्वचालित रूप देखि सब भन्दा बलियो संकेत संग इकाई मा जडान गर्नुहोस्। धेरै शान्त र उपयोगी। म चाहन्छु कि मैले यो दुई बर्ष पहिले गरेको थिएँ।
मैले राउटरको वाइफाइ राखेको छु। मेरो लागी म यो बाट हस्तक्षेप देखीरहेको छैन, त्यसैले म यसलाई एक फिर्ता को रूप मा राखीरहेको छु, बस मामला मा मलाई राउटर को वाईफाई मा स्विच गर्न को लागी। BTW, मेरो स्थिति मा, सबै तीन एकाइहरु बाट वाईफाई संकेत राउटर भन्दा धेरै बलियो छ, र वायरलेस गति दोब्बर छिटो छ, माथि र तल।
जनवरी 14, 20222मा: 28 हूँ
के तेस्रो-पक्ष राउटरको साथ यो दायरा विस्तारक प्रयोग गर्न सम्भव छ? मलाई WPS पिन कोड के हो भनेर जान्न आवश्यक छ कसैलाई थाहा छ?
मेरो नाम, ईमेल, र बचत गर्नुहोस् webअर्को पटक म टिप्पणी गर्न को लागी यस ब्राउजर मा साइट।
Meizhou Hongfeng कला शिल्प 266285 BJ 57IN Snowman with Snowflakes निर्देशन पुस्तिका
AJAX 7661 StreetSiren वायरलेस आउटडोर साइरन प्रयोगकर्ता पुस्तिका
AJAX 17938 12V PSU Hub/Hub Plus/ReX पावर सप्लाई युनिट प्रयोगकर्ता म्यानुअलको लागि
AJAX 10306 ट्रान्समिटर ताररहित डिटेक्टर कन्भर्टर प्रयोगकर्ता म्यानुअलमा तार
मार्क एल पिटरका on ZERFUN G8 प्रो वायरलेस माइक्रोफोन प्रणाली प्रयोगकर्ता पुस्तिका
कर्ट on एयररेक्स इन्फ्रारेड हीटर एएच-२०० / 200०० / User०० उपयोगकर्ता पुस्तिका
2017 टोयोटा क्यामरी हाइब्रिड LE फ्यूज बक्स रेखाचित्र on टोयोटा Camry यात्री फ्यूज बक्स आरेख
2017 मित्सुबिशी लान्सर 4WD फ्यूज बक्स रेखाचित्र on मित्सुबिशी लांसर यात्री र इन्जिन फ्यूज बक्स आरेख
के टाउनसेन्ड on मीरा ईमानदारी ईआरडी बार भल्भ र फिटिंग प्रयोगकर्ता मैन्युअल